I-Nurin Cottage-indawo yakho yokuhlala enefenitshala ngokupheleleyo
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguMohd Neguib/Zalila
I-Nurin Cottage-ilizwe lethu elimangalisayo I-Cottage e-Kg Janda Baik ibekwe kakuhle kwindawo yasemaphandleni etyebileyo ngohlaza kunye nokuzola. Ngemekobume entsha esempilweni, ipropathi yakhiwe njengendawo enkulu evulekileyo kunye negadi eqinisekisa ukuhamba komoya opholileyo ojikeleze i-cottage. Umhlaba wethu oziihektare ezintathu usikelelwe ngobume bomhlaba obungaka: isandi esithomalalisayo somlambo oqukuqelayo ngaphambili; induli entle kunye nolondolozo lwehlathi ngasemva; Izityalo ezihlala ziluhlaza kunye nefauna indawo eqhubekayo yomoya opholileyo
I-cottage yenzelwe i-motifs yomxholo we-rustic kunye neklasikhi - indawo enkulu yokwakha engaphezulu kwe-1,600 sq ft; Ihonjiswe ngomgangatho oqhelekileyo, iveranda entle, ipatio ecocekileyo nelula kunye nentendelezo egcwele umngxuma weBBQ ogqunyiweyo. Indawo yokuhlala kunye neendawo ezivulekileyo ngaphakathi kwe-cottage zikhulu ngokwaneleyo ukuba iindwendwe zihlale kwaye zijikeleze. Kukho izinto ezininzi zokungenisa umoya ezineengcango ezityibilikayo nezisongwayo kunye neendawo zokungena ezibonwayo endaweni yeendonga nje. Igumbi elisezantsi lilodwa kakhulu oko kukuthi iindonga zesilingi kunye noyilo lomgangatho: kunye negumbi lokuhlambela elincanyathiselwe. Sinamagumbi amabini aphezulu - igumbi losapho eliphangaleleyo kakhulu kunye ne-attic.
Ukongeza kwi-cottage sinamagumbi amabini, indlu encinci, enye i-gazebo, igadi enkulu kunye nendawo evulekile ngokufanelekileyo iyimfuneko yokumisa inkampu kunye nebala lokudlala; enemingxuma emithathu yeBBQ.
Kukho izindlu zangasese ezintathu ezicocekileyo nezicocekileyo ezingaphandle, enye yazo yindlu yangasese enobubele. I-cottage iqukiwe - eyilwe kwaye yakhiwe njengesakhiwo esilungele abantu abakhubazekileyo, akukho ngxaki kwintshukumo yesitulo esinamavili.
Sinezibane ezigcweleyo ngaphakathi nangaphandle kwendlwana enezibane ezipholileyo macala onke ngaphandle kweyadi, idekhi, igononi kunye neendawo zegadi.
Ezinye izixhobo ezifumanekayo:
-Ikhabhathi yamagumbi amabini (intlawulo eyahlukileyo)
-Indlu enye encinci okanye encinci / iPondok (intlawulo eyahlukileyo)
- One Gazebo - Yeendwendwe kuphela
- Izindlu zangasese ezintathu zangaphandle - Zeendwendwe kuphela
- Imingxuma emithathu yeBBQ (enye igutyungelwe) - Yeendwendwe kuphela
4.61 · Izimvo eziyi-74
Uluntu lwase-Kampung Janda Baik ngokuqinisekileyo lolodwa onokuzingca ngalo kuba akukho nto injengendawo engakhuselekanga naphi na ebumelwaneni. Abahlali baya kujongana omnye nomnye ukubonelela ngenkxaso okanye uncedo ngexesha leemfuno. Bayinyamekela indawo yokuhlala kwaye ngokuqinisekileyo ukhuseleko lwendawo yokuhlala luhlala luqwalaselwa. Ukuza kuthi ga ngoku, akukho mcimbi unxulumene nolwaphulo-mthetho okanye ukuziphatha kakubi. Abamelwane bethu abasondeleyo bakwimisebenzi yoshishino lwezolimo - ukuba namasimi kunye neendawo ekuchithelwa kuzo iiholide. Kukho umlambo omhle kanye phambi komhlaba wethu. Kukho iibhayisekile kunye nee-ATV ezifumanekayo ukuba zirente kufutshane nendawo yethu. Kwakhona, umgama wokuhamba ukuya kwimpahla yebhola yepeyinti. Kukho iindawo zokutyela ezibonelela ngokutya kwalapha ekhaya. Singalungiselela ukutya ukuba uyathanda ukuba nendibano njl.njl
Umbuki zindwendwe ngu- Mohd Neguib/Zalila
Sisoloko sikwinkonzo yakho kwaye siyafumaneka kuwo nawuphi na umbuzo
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Janda Baik, Bentong